🥇 ▷ loogu talagalay inay nolosha siiso himilo leh awood heer kale ah - Samsung Newsroom Latin America ✅
loogu talagalay inay nolosha siiso himilo leh awood heer kale ah – Samsung Newsroom Latin America
Qalabka wax soo saarka iyo hal abuurka ee Galaxy Note ka awood badan oo leh S Pen la xoojiyay iyo kamarad tayo leh oo tayo leh, ayaa hadda ku jira laba cabbir
Samsung Electronics Co., Ltd. ayaa maanta soo bandhigtay Galaxy Note10, oo ah qadka cusub ee casriga casriga ah ee isku darka naqshad qurux badan oo leh waxqabad awood leh iyo agab waxsoosaar oo ka caawiya dadka isticmaala inay sifiican u bartaan daqiiqad kasta. Iyada oo laga duulayo jiil si qumman u qulqulaya shaqada iyo nolosha shaqsiga ah, Galaxy Note10 wuxuu siinayaa dadka isticmaala xorriyadda inay u shaqeeyaan habka ay rabaan oo ay u muujiyaan niyaddooda hal abuurka ah, dhammaantoodna waa socdaan. Muddo sanado ah, taxanaha Galaxy Note wuxuu ka caawiyay malaayiin isticmaaleyaal daacad ah oo adduunka ah inay raacaan damacyadooda oo ay gaaraan yoolalkooda, iyo Galaxy Note10, Samsung waxay ka caawineysaa isticmaalayaashu inay qabtaan wax ka badan inta ay jecel yihiin.
“Bilowgii, Galaxy Note Waxay la mid noqotay teknoolojiyadii ugu fiicnaa iyo astaamihiisii. Galaxy Note10 wuxuu dib u xaqiijinayaa ballanqaadkan fanaaniinta casriga ah ee Note ee adeegsada taleefankiisa casriga ah si uu u qaato waxsoosaarkiisa iyo hal abuurnimadiisa heerka soo socda, taasina waxay ku socotaa si aan kala go ’lahayn inta u dhaxaysa fikradaha iyo dadaalkasta waqti kasta,” ayuu yidhi DJ Koh, madaxweynaha iyo Madaxa Kombuyuutarka iyo Qeybta Isgaarsiinta Mobilada, Samsung Electroniga. Qayb kasta oo ka mid ah Galaxy Note10 waxaa loogu talagalay inay ka caawiso adeegsadayaasha inay waxbadan gaaraan. Haddii aad dhammeyneyso mashruuc shaqo oo weyn, qabashada iyo tifatirka fiidiyowga, ama aad ciyaareyso ciyaarta mobilada aad ugu jeceshahay, Galaxy Note10 ayaa ka caawin doonta iyaga inay si dhakhso ah oo wanaagsan u qabtaan. ”
QARAX UJEEDDADA UJEEDDADA KHILAAFKA KHUDBADAHA
Isticmaalayaasha Galaxy Note Waxay qadariyaan awooda naqshadeynta casriga ah, kaliya ma ahan muuqaalka aaladdaada, laakiin waaya aragnimada ay soo bandhigto. Qayb kasta oo ka mid ah Galaxy Note10 waxaa loogu talagalay inay noqoto mid xarrago leh, jilicsan oo aan wax ku jeedin, si kuwa adeegsada ay u gutaan feejignaantooda buuxda fikradaha, mashaariicda iyo waxyaabaha ugu muhiimsan.
Laba cabir: markii ugu horreysay ee Galaxy Note10 wuxuu ku yimaadaa laba cabbir si macaamiisha u heli karaan Ogeysiiska ku habboon iyaga. Galaxy Note10 wuxuu u furayaa qalabkan kuwa doonaya awoodda S Pen iyo waxsoosaarka ugu badan ee mobilada is haysta, isagoo xirxiraya Muuqaalka Infinity 6,3 inji ee Cinematic Infinity Display on the note ilaa iyo hadda si ka badan. Galaxy Note10 + wuxuu soo bandhigayaa shaashadda Note note ee ugu weyn abid lagu arko shaashad 6.8 inch Cinematic Infinity shaashadda aalad weli si fudud loo qaban karo loona isticmaali karo.
Shaashadda Galaxy Note10 ayaa ah tan ugu wanaagsan ee Samsung illaa iyo haatan: Laga soo bilaabo dhismaheeda jir ahaaneed ilaa tikniyoolajiyadeeda hoose, shaashadda waxaa loogu talagalay inay ku quusto dadka isticmaala telefishanka ay jecel yihiin, filimada iyo cayaaraha.
Naqshadeynta geeska: Shaashadda kinematic inineity to gees ilaa geeska Galaxy Note10 malahan wax bevel ah, halka jarista shaashadda hore ee kamaraddu ay yar tahay oo xudun u ah naqshadeynta miisaaman. Shaashadda ugu intabadan ee Samsung waxay abuurtaa waayo-aragnimo qumman oo udhaxeysa fikirka iyo ficilka, aragtida iyo abuuritaanka.
Shaashadda tayada ugu wanaagsan: Galaxy Note10 wuxuu soo bandhigayaa shaashadda abaalmarinta Dynamic AMOLED shaashadda. Iyada oo la adeegsanayo caddeyn HDR10 + iyo khariidad cod oo firfircoon, sawirro iyo fiidiyowyo ayaa ka sii iftiimaya aaladaha Xusuus-qorka hore oo leh midabyo aad u ballaaran. UL ayaa xaqiijisay shaashadda(mid) Galaxy Note10 ee midabkeedu yahay 98% midabkiisuna yahay isku dhala dhalasho. Shaashadda raaxada ee Indhaha waxay yareysaa iftiinka buluuga ah iyadoo aan saameyn ku yeelan tayada tayada midabka loo arko(labo).
DHAQANKA MULTIPHACETIC wax soo saar LAGU HAYO WAALIDIIN KASTA
Maskaxda ku hay in adeegsadayaashu ay qiimeeyaan waxsoosaarka oo tixgeliyaan taleefankooda inay lama huraan u tahay inay ka caawiyaan sidii ay u gaari lahaayeen wax badan. Isticmaalahan, Galaxy Note10 wuxuu soo bandhigayaa teknoolojiyad cusub, awoodo wanaajinaya iyo is dhexgal xoog leh, dhammaantoodna waxay ku jiraan adeeg siinta dadka isticmaala xorriyadda ay ugu shaqeeyaan qaab ka dhigaya mid wax soo saar badan.
Qoraalka gacanta: Galaxy Note10 wuxuu bixiyaa awood cusub oo awood badan oo loogu talagalay dib u habeynta iyo hal-jirka S Pen. Hadda, adeegsadayaashu gacanta ayey qori karaan qoraalkoodana isla markiiba waxay ugu beddeli karaan qoraal qoraal ah oo dijital ah Samsung Notes app, waxayna u dhoofin karaan qaabab kala duwan oo kala duwan, oo ay ku jiraan Microsoft Word. Adeegsadayaashu hadda waxay astayndoonaan qoraalada iyagoo yareeya, weynaya ama beddelaya midabka qoraalka. Dhawr taabasho uun, daqiiqadaha kulanka ayaa la qaabayn karaa lana wadaagi karaa; Pops of dhiirigelin si dhakhso leh u noqon karaan dukumiintiyada tafatirka.
Isbedelka S Pen: Galaxy Note10 wuxuu ku saleysan yahay awooda hooseysa ee Bluetooth-karti u leh S Pen ee lagu soo bandhigay Galaxy Note9 markii lagu daro ficillada Hawada, oo kuu oggolaanaya inaad ku xakameyso astaamaha qaarkood ee qalabka adoo adeegsanaya dhaqdhaqaaqyada ‘S Pen’. Marka la furayo Waxqabadka Hawada SDK, horumariyayaashu waxay abuuri karaan kontaroollada caadooyinka u siisa dadka isticmaala awood ay ku ciyaaraan ama u isticmaalaan barnaamijyadooda ay ugu jecel yihiin dhaqdhaqaaqyada.
Samsung DeX ee PC(3): “Galaxy Note10” waxay sii ballaarinaysaa awooda Samsung DeX, taasoo u sahlaysa dadka isticmaala inay ka shaqeeyaan inta udhaxaysa taleefankooda iyo PC ama Mac. Iyada oo leh xiriir USB fudud oo la jaan qaadaya, adeegsadayaashu waxay soo jiidi karaan oo ku ridi karaan feylasha u dhexeeya aaladda oo ay u adeegsan karaan barnaamijyadooda mobiladeed ee ay jecel yihiin iyagoo adeegsanaya jiir iyo keyboard, halka aad xogtaada ku ilaalineyso taleefankaaga Samsung Knox.
Isku xirka Windows: Galaxy Note10 iskuxirka Isku xirka Windows tooska ah ee gudiga deg degga ah. Kaliya hal riix, adeegsadayaashu waxay kuxiran karaan kombuyuutarkooda kumbuyuutar Windows 10. Halkaa, waad ku arki kartaa ogeysiisyada, diri kartaa iyo heli kartaa farriimaha, iyo dib ufiirin kartaa sawirradii dhowaa adigoon istaagin inaad fiiriso taleefankaaga.
CAMBILAASHA SHAQAALAHA KHUDBADAHA EE MASHRUUCYADA
Iyada oo la adeegsanaysa Galaxy Note10, hal abuurayaasha nuxurka iyo adeegsadayaasha caanka ah waxay adeegsan karaan aalado farshaxanimo casri ah si ay u soo qabtaan fiidiyowyo cajiib ah iyo sawirro, iyagoo u oggolaanaya kanaalkooda, sheekooyinkooda iyo qoraalkooda inay istaagaan oo saameyn yeeshaan. Marka lagu daro tikniyoolajiyadda sawirka sare iyo softiweer, Galaxy Note10 waxay sare u qaadeysaa sawir-qaadista iyo sawir-gacmeedka wareega illaa heerka xiga.
Teknolojiyada fiidiyoowga ee fiiga ah Galaxy Note10 wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay qabtaan fiidiyowyo tayo sare leh iyagoon haysan wax qalab dheeri ah. The Fiidiyow toos ah oo diiradda la saarayo Ku dar qoto dheer ee meerayaasha duurka si aad u iftiimin karto asalka si aad u xoojiso maaddadaada. Soo Dhaweyn-Mic Ku xooji codka maqalka isla markaana meel dhig asalka gadaal si uu kaaga caawiyo inaad diirada saarto dhawaqa aad rabto. Iyo in la baabi’iyo kuuskuusyada iyo fowdada guud ahaan ka dhigaya ficil toogasho ah, mid cusub oo hagaagay Super Steady xasiliyaa muuqaalka, oo hadda waa la heli karaa Hyperlapse wakhtiyo joogto ah oo fiidiyowyo ah.
Tafatirid deg deg ah oo fudud oo video ah: Mar alla markay duubto fiidiyoogooda, adeegsadayaasha Galaxy Note10 way qori karaan meelkasta oo isla markiiba taleefankaaga. Tifatiraha fiidiyaha ayaa loo isticmaali karaa ‘S Pen’, sidaa daraadeed halkii ay taaban lahaayeen si ay u xushaan ama u saxaan feyl, adeegsadayaashu waxay dooran karaan waqtiga saxda ah ee ay doonayaan inay beero. Hal-abuurayaasha u baahan xitaa xakamayn dheeri ah oo ku saabsan sawirradooda, Adobe Rush(4) at Galaxy Note10 waxay bixisaa qalab casri ah oo aaladaha wax ka badalka ah, hadda xitaa ka sii saxsan S Pen.
Qoraalka shaashadda: Ciyaartoyda doonaya inay ku daraan shaqsiyan shaqadooda idaacadaha, ama vloggers-yada doonaya inay horumariyaan wax dhigista, Galaxy Note10 wuxuu soo bandhigayaa Rikoor duub. Si fudud u qabso waxa shaashada ku yaal, u adeegso sawirka muuqaalka si aad ugu darto falcelinta oo u isticmaal S Pen si aad u sharaxdid halka aad ugu duubneyso fiidiyow aad u madadaalo ah oo ku mashquulsan.
AR Doodle iyo scanner 3D: Galaxy Note10 wuxuu isku daraa cutubka goynta AR iyo awoodaha 3D ee kamarada. Iyada oo ay weheliso kaamirada Ultra Wide, waxay u furaysaa dhexdhexaad cusub gebi ahaanba hal abuurka. Iyadoo AR Doodle, u isticmaal S Pen si aad u habaynaysid sawirro leh sawirro firfircoon, saameyno iyo animations raacaya sawirka. Iyo Sawirka 3D(5), hal-abuuraha ugu horreeya ee Ogeysiiska, kamaradda DepthVision ee Galaxy Note10 + iskaan karaa shay(6) oo isla markaaba loogu beddelo ka dhigitaan 3D wareega ah.
Qaabka Habeenki: Dadku waxay qaataan nafsiyo badan xaalado fudud: qadada, riwaayadaha ama kaliya ku raaxeysiga qorrax dhaca. Qaabka Habeenki, oo hadda laga heli karo kamaradda hore, wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay soo qabtaan nafiyo la yaab leh si kastoo ay mugdi ama mugdi u yihiin shuruudaha.
QAABKA LACAG LA’AAN OO LAGU SAMEEYAHAY MAGACA UGU DANBEEYA
Maskaxda ku hay in taageerayaashu ay u adeegsadaan taleefannadooda wax walba, kaliya maahan inay wax ka qabtaan howlaha maalinlaha ah, laakiin inay qaadaan mashruucyo waaweyn: maareeyaan meheraddaada, tifatirka fiidiyowyada kanaalkaaga warbaahinta bulshada, u abuuraan sawirro qurux badan S Pen. Si looga caawiyo iyaga inay wax walba sameeyaan, Galaxy Note10 waxaa loogu talagalay qalab-heer sare ah iyo astaamo sare.
Lacag dhakhso badan: oo keliya 30 daqiiqo oo lacag qaadasho ah, Galaxy Note10 + wuxuu socdaa maalinta oo dhan(7) oo leh culeyska xarkaha fiilada illaa 45W(8).
Wireless PowerShare: Wireless PowerShare wuxuu ku yimaadaa Ogeysiiska. Adeegsadayaashu waxay si aanlaali karin dib ugula soo wareegi karaan aaladda Galaxy Watch, Galaxy Buds ama aaladda kale ee karti u leh ee loo yaqaan ‘Galaxy Note10’(9).
Ciyaaraha: Maaddaama cayaaraha mobilada ay helaan howsha badan iyo sawirada, khibradaha ciyaarta ugu fiican waxay ubaahan yihiin tilmaamaha ugu fiican. Galaxy Note10 wuxuu leeyahay nidaamka qaboojinta qolka uumiga ugu khafiifsan adduunka, kaas oo bixiya wax qabad fiican intii lagu jiray ciyaarta halka qalabku uu yahay mid jilicsan oo xarrago leh. Iyada oo la adeegsanayo Qalabka Ciyaarta ee ku saleysan AI-ga, Galaxy Note10 waxay horumarisaa waxqabadka iyo isticmaalka tamarta marka loo eego ciyaarta. Iyo adeegsiga qulqulka PlayGalaxy Link P2P, adeegsadayaashu waxay dib u bilaabi karaan meeshii ay uga tageen ciyaar kasta oo PC ah una ogolaaneysa inay sii wadaan ciyaarahooda iyada oo aan loo baahnayn kaydinta maxalliga ah.
Xawaaraha Hyperfast: Iyada oo la adeegsanayo xulashooyinka LTE iyo 5G, isticmaaleyaasha Note10 waxay si buuxda uga faa’iideysan karaan xawaaraha dhaqsaha badan ee hawl-wadeenadooda. Galaxy Note10 + 5G ayaa xannibaysa awoodda buuxda ee shabakadda si ay ugu qulqulaan fiidiyoow muuqaal-sare ah, soo dejiso maaddooyinka si heer sare ah u dheereeya isla markaana leh barnaamijyo badan oo leh naqshado badan waqtiga dhabta ah. Adigoo noo oggolaanaya inaan wax walba si dhakhso leh u qabno, Note10 + 5G ayaa beddeleysa sida aan u isticmaalno waxyaabaha aan u xirno oo aan u xirno.
WAAJIBAADKA DHAQANKA EE GALAXY
Galaxy Note10 waa udub dhexaadka deegaanka deegaanka, Galaxy, oo ah badeecado iyo adeegyo qaali ah oo bixiya khibrado lagu caawinayo nolosha isticmaaleyaasha inay noqdaan kuwa dagan oo iskuxiran. Aaladaha la qaadan karo sida Galaxy Watch Active2 iyo kiniiniyada sida Galaxy Tab S6 ayaa ku xiray inay ku xirnaadaan oo ka caawiyaan sidii ay wax badan u gaari lahaayeen.
Iyada oo ku saleysan alaabadaasi waa adeegyo Samsung ah oo dadka isticmaala siiya khibrad Galaxy ku xiran. Samsung Pay waxay kuu ogolaaneysaa xulashooyinka lacag bixinta xawaaraha iyo amniga ah. Samsung Health waxay ka caawisaa dadka isticmaala inay gaaraan yoolkooda caafimaad iyo fayoqab leh kormeerka aan kala joogsiga lahayn iyo la socodka. Samsung Knox wuxuu ka ilaaliyaa macluumaadka xalka amniga heerka difaaca. Bixby, qalabka sirdoonka ee Samsung, wuxuu bixiyaa taageero isku dhafan si noloshaada u fududaato, abaabusho oo xiriir leh.
CADAADISKA GALAXY NOTE10
Galaxy Note10 iyo Galaxy Note10 + waxaa laga heli doonaa Aura Glow, Aura White iyo Aura Black laga bilaabo Ogos 23. Wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan Galaxy Note10, booqo http://news.samsung.com/latin, news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com
Faahfaahinta Galaxy Note10, Note10 +
shaashadda FHD + 6.3 gudaha.
Wareeg firfircoon AMOLED Infinity-O,
HDR10 + caddeyn
Quad HD + 6.8 gudaha.
Muuqaal firfircoon AMOLED Infinity-O
* Shaashadda waxaa loo qiyaasaa sida xagal buuxa iyada oo aan xisaabta lagu darsan geesaha wareegsan; Goobta dhabta ah ee muuqaalka ayaa ka yar sababtoo ah geesaha wareegsan iyo godka kamaradda.
* Go’aanka aan caadiga ahayn ee Galaxy Note10 + waa mid HD oo buuxa + waxaana loo beddeli karaa Quad HD + oo kujira Settings.
Kaameera Gadaal: Kamarad Saddex Geesood ah
– Ultra Wide: 16 MP, F2.2 (123 °)
– Xagal ballaaran: 12 MP, 2 PD, AF F1.5 / F2.4 OIS (77 °)
– Telephoto: 12 MP, F2.1 OIS (45 °)
Dhanka: 10 MP 2PD AF, F2.2 (80 °)
Gadaal: Quad Camera
– Kaameerada ‘DepthVision’: VGA
Qaabka 71.8 x 151.0 x 7.9mm, 168g
(S Pen BLE: 5.8 × 4.35 × 105.08 mm, 3,04 g)
* Moodeelka Galaxy Note10 + 5G mmWave culeyskiisu waa 198 g.
Processor – 7 nm 64-bit Octa-core processor (Max 2.7 GHz + 2.4 GHz + 1.9 GHz)
– 7 nm 64-bit Octa-core processor (Max 2.8 GHz + 2.4 GHz + 1.7 GHz)
* Waxaa laga yaabaa inay ku kala duwanaadaan suuqa iyo wadaha moobiilka.
Xusuusta – 8 GB oo RAM ah oo leh 256 GB oo kaydinta gudaha ah
(Moodeelka LTE kaliya)
– 12GB Ram oo leh 256GB kaydinta gudaha
(5G moodal kaliya)
– 12GB Ram oo leh 512GB oo kaydinta gudaha ah
* Waxay ku kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran moodalka, midabka, suuqa iyo howlfuliyaha mobilada.
* Xusuusta isticmaalaha ayaa ka yar wadarta xusuusta ay ugu wacan tahay keydinta nidaamka hawlgalka iyo softiweerka loo adeegsado in lagu hawlgaliyo ilaha aaladda. Xusuusta dhabta ah ee isticmaalaha ayaa ku kala duwanaan doonta hawl wadeenka waana la beddeli karaa ka dib markii la sameeyo cusbooneysiinta software-ka.
Kaarka SIM-ka LTE Dual SIM: Nano SIM iyo Nano SIM Dual SIM (hybrid): Nano SIM iyo Nano SIM ama guntin microSD (ilaa 1 TB)
5G SIM fudud: a Nano SIM SIM fudud: Nano SIM iyo shaashad MicroSD ah (illaa 1 TB)
* Kaarka SIM iyo kaarka MicroSD si gooni gooni ah ayaa loo iibiyay.
* Saxarada isku-dhafka ah ee ‘SIM SIM’ waxaa lagu heli karaa oo keliya moodada loo yaqaan ‘Galaxy Note10 + LTE’.
Durbaan(10) 3500 mAh (caadiga ah) 4300 mAh (caadiga ah)
* Qiimaha caadiga ah ee lagu tijaabiyay xaaladaha shaybaarka saddexaad. Qiimaha caadiga ah waa qiyaasta celceliska qiyaasta marka laga fiirsanayo kala-duwanaanta awoodda bateriga inta udhaxeysa muunadaha batteriga ee la tijaabiyay iyadoo loo eegayo IEC 61960. Awooda magacaaban (ugu yar) waa 3400 mAh ee Galaxy Note10 iyo 4170 mAh ee Galaxy Note10 +. Nolosha dhabta ah ee baytariga way ku kala duwanaan kartaa iyadoo ku saleysan jawiga shabakadda, qaabka isticmaalka iyo qodobo kale.
* Waxay la jaan qaadayaan Super Fast Charging oo leh fiilo leh QC2.0, AFC iyo PD3.0
* Xawaaraha ku-dallacsiinta Wireless-ka ee Wicitaanka Wireless Degdega ah 2.0 WPC iyo PMA iswaafaqsan
* Awoodda Wireless-ka: Wireless PowerShare waxay ku xadidan tahay taleefannada casriga ah ee Samsung ama astaan ​​kale oo leh WPC Qi wireless wirelessiyayn
SW Android 9.0 (Jeex)
Net LTE Kobciyay 4 × 4 MIMO, ilaa 7CA, LAA, LTE Cat. 20
– Ilaa 2.0 Gbps kala soo bixi / ilaa 150 Mbps upload
* Xawaaraha saxda ah way ku kala duwanaan karaan wadan, wada shaqeyn iyo deegaanka adeegsadaha.
* Wuxuu u baahan yahay isku xirnaan 5G ah oo aan fiicnayn. Xawaaraha saxda ah way ku kala duwanaan karaan wadan, shirkad shaqeyneed iyo deegaanka adeegsadaha.
Isku xirnaanta Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax (2.4 / 5 GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024 QAM
– Ilaa 1.2 Gbps kala soo bax / ilaa 1.2 Gbps rar
Bluetooth® v 5.0, ANT +, USB Type-C, NFC, Goobta (GPS, Galileo *, Glonass, BeiDou *)
* Caymiska Galileo iyo BeiDou waa la xaddidi karaa. BeiDou lagama yaabo in laga helo suuqyada qaarkood.
Bixinta NFC, MST
* Waxey ku kala duwanaan karaan suuqa, howl wadeenka mobilada iyo adeeg bixiyaasha.
Dareemayaasha Accelerometer, barometer, qalabka dareenka sawirka faraha, dareeraha cirro, dareemaha geomagnetic, dareeraha hoolka, dareeraha udhaw, qalabka iftiinka RGB
(S Pen BLE: 6-axis dareeraha oo ay kujirto dareeraha cirro iyo xawaaraha xawaaraha)
Xaqiijinta Nooca Qufulka: Qaabka, PIN, Furaha
Noocyada qufulka biometriiska: Faraha sawirka faraha, garashada wajiga
Cod Ku hadla stereo iyo makiinadaha dhagaha: codka AKG
(Qalabka madax-weynaha waxaa ka mid ah: Nooc nooca-C ah, nooca channel hybrid, cutubka 2-way firfircoon)
Codadka hareeraha ah oo leh teknoolojiyadda Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus ayaa lagu daray)
Qaabka dib-u-ciyaarida maqalka:
Fiidiyow MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
* Dhamaan howlaha, astaamaha, faahfaahinta iyo macluumaadka kale ee soosaarka ee lagu bixiyay dukumintigan, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, faa’iidooyinka, qaabeynta, qiimaha, qaybaha, waxqabadka, helitaanka iyo awooda wax soo saarka ayaa la beddeli karaa ogeysiis hore. ogeysiis.
(mid) Galaxy Note 10 UL ayaa xaqiijisay Bandhigaaga Hoonka Bandhiga ah oo leh 98% midab iyo midab dhalaalaya iyo 92% daah furnaan kamarad.
(labo) TÜV Rheinland, machad shahaado oo adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay, oo lagu abaal mariyay Galaxy Note10 iyo Note10 + ayaa muujinaya shahaadada Indhaha Indhaha iyadoo ku saleysan awooddeeda si weyn hoos loogu dhigo waxyeelada waxyeelada leh ee iftiinka buluuga ah. Shahaadadan waxaa laga heli karaa www.tuv.com oo leh ID 1419071436.
(3) Waxaa laga heli karaa Windows 7, Windows 10 Windows Windows, iyo High Sierra, Mac Mojave
(4) La Soo Dejin Karo Adobe Rush
(5) Lagu soo Dejisan karo Sawirka 3D
(6) Aagga la iskaanka karo ee leh Sawirka 3D ayaa ka kooban 10x10x10cm illaa 80x80x80cm
(7) Nolosha dhabta ah ee baytariga way ku kala duwanaan kartaa iyadoo ku saleysan jawiga shabakadda, qaabka isticmaalka iyo qodobo kale.
(8) Waxaa keliya oo loo heli karaa Galaxy Note10 +. Xaraashka 45W waa in si gaar ah loo iibsadaa.
(9) Wireless PowerShare waxaa laga yaabaa inaysan la shaqeyn karin waxyaabaha aan Samsung ahayn ama daboolida. Waxay saameyn ku yeelan kartaa soo dhaweynta wicitaanka ama adeegyada macluumaadka, iyadoo kuxiran jawiga shabakadaada.
(10) Qiimaha caadiga ah ee lagu tijaabiyay xaaladaha shaybaarka saddexaad. Awoodda magacaabida (ugu yaraan) waa mid hooseysa. Nolosha dhabta ah ee baytariga way ku kala duwanaan kartaa iyadoo ku saleysan jawiga shabakadda, qaabka isticmaalka iyo qodobo kale. Macluumaad dheeri ah, booqo www.samsung.com.